နပွေညျတျော၊ ဇူလိုငျ – ၁၆
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Chen Hai အား ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ရဲဝငျးဦးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ စဈသံမှူး Senior Colonel Xiong Shaowei နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ တရုတျနိုငျငံတို့သညျ မိတျဆှကေောငျး၊ မိတျဆှဟေောငျး၊ မဟာဗြူဟာမိတျဖကျနိုငျငံမြားဖွဈပွီး ညီရငျးအကိုစိတျဓာတျဖွငျ့ နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေးတိုးတကျကောငျးမှနျအောငျဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ သွဂုတျလ ၁ ရကျနတှေ့ငျ ကရြောကျမညျ့ တရုတျပွညျသူ့လှတျမွောကျရေးတပျမတျော၏ (၉၃) နှဈမွောကျ တပျမတျောထူထောငျသညျ့နေ့ အထိမျးအမှတျသဝဏျလှာကို နိုငျငံအသီးသီးမှ နိုငျငံခေါငျးဆောငျမြား၊ တပျမတျောအကွီးအကဲမြားက တရုတျနိုငျငံသို့ ပေးပို့ခဲ့ပွီး မွနျမာ့တပျမတျော တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက အစောဆုံးပေးပို့ခဲ့ သညျ့အတှကျ တရုတျတပျမတျောမှ ဝမျးမွောကျဂုဏျယူပွီး တပျမတျောနှဈရပျအကွား ထူးခွားသညျ့ နကျရှိုငျးသော ဆကျဆံရေးသမိုငျးကွောငျးရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ COVID-19 ရောဂါဖွဈပှားမှုကာလအတှငျး မွနျမာ့တပျမတျောမှ တရုတျနိုငျငံသို့ ရောဂါကာကှယျရေးအထောကျအကူပွု ဆေးဝါးမြား ပေးပို့လှူဒါနျးခဲ့သညျ့ အခွအေနေ မြားနှငျ့ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့လှတျမွောကျရေးတပျမတျောမှလညျး ဆေးဘကျဆိုငျရာကြှမျးကငျြပညာရှငျမြားစလှေတျ၍ မွနျမာ့တပျမတျောသို့ COVID-19 ရောဂါ ကာကှယျရေးအထောကျအကူပွုဆေးနှငျ့ ဆေးပစ်စညျးမြား လှူဒါနျးကာ ရောဂါထိနျးခြုပျကုသရေးဆိုငျရာမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးနိုငျခဲ့ သညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ တပျမတျောမှ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေားနှငျ့ တရုတျနိုငျငံအနဖွေငျ့ တပျမတျော၏ငွိမျးခမျြးရေးကွိုးပမျးဆောငျရှကျမှုမြားအပျေါ နားလညျထောကျခံပွီး မွနျမာနိုငျငံမွောကျပိုငျးဒသေ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျ လကျတှကေ့ကြနြီးကပျစှာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျ့အခွအေနမြေား၊ နယျစပျဒသေလုံခွုံရေး၊ တညျငွိမျအေးခမျြး ရေးနှငျ့ မူးယဈဆေးဝါး နှိမျနငျးရေးတို့တှငျ တပျမတျောနှဈရပျအကွား သတငျးအခကျြ အလကျနှငျ့ နညျးပညာမြားဖလှယျကာ အတူတကှပူးပေါငျးလကျတှဲဆောငျရှကျသှားရနျ လိုသညျ့အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား မီဒီယာပိုငျးဆိုငျရာလုပျငနျးမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောအနဖွေငျ့ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြား၊ တပျမတျောမြားနှငျ့ မိတျဝတျမပကျြ ဆကျဆံရေး၊ ငွိမျးခမျြးစှာ အတူယှဉျတှဲနထေိုငျရေး မူကွီး(၅)ရပျအတိုငျး ဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး မွနျမာနိုငျငံ၏နိုငျငံခွားရေးမူဝါဒမြားအတိုငျး အလေးထားလိုကျနာ ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ အာရှဒသေ၊ အာဆီယံ ဒသေအတှငျး စဈပှဲနှငျ့ ပဋိပက်ခကို ဦးတညျသညျ့ မညျသညျ့ ဖွဈစဉျဖွဈရပျမြားကိုမဆို မလိုလားဘဲ ငွိမျးခမျြးစှာဖွရှေငျးဆောငျရှကျပွီး ဒသေတှငျးတညျငွိမျ အေးခမျြးရေးအတှကျ အတူတကှ လကျတှဲဆောငျရှကျသှားရနျလိုသညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွဝတီဘကျတှငျ ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ ရှကေုက်ကိုလျ မွို့သဈစီမံကိနျးသညျ တရုတျနိုငျငံက ဆောငျရှကျနေ သညျ့ OBOR စီမံကိနျးမြားနှငျ့ လုံးဝ သကျဆိုငျခွငျးမရှိဘဲ ကုမ်ပဏီတဈခုမှ လုပျဆောငျခွငျး ဖွဈပွီး တရားဥပဒနှေငျ့အညီ၊ စညျးကမျးနှငျ့အညီ ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနေ မြားနှငျ့ နှဈနိုငျငံနှငျ့ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ရေး ဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ခငျမငျရငျးနှီးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် – ၁၆
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chen Hai အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Senior Colonel Xiong Shaowei နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် မိတ်ဆွေကောင်း၊ မိတ်ဆွေဟောင်း၊ မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ညီရင်းအကိုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏ (၉၃) နှစ်မြောက် တပ်မတော်ထူထောင်သည့်နေ့ အထိမ်းအမှတ်သဝဏ်လွှာကို နိုင်ငံအသီးသီးမှ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ တပ်မတော်အကြီးအကဲများက တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အစောဆုံးပေးပို့ခဲ့ သည့်အတွက် တရုတ်တပ်မတော်မှ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပြီး တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ထူးခြားသည့် နက်ရှိုင်းသော ဆက်ဆံရေးသမိုင်းကြောင်းရှိသည့် အခြေအနေများ၊ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကာလအတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောဂါကာကွယ်ရေးအထောက်အကူပြု ဆေးဝါးများ ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့သည့် အခြေအနေ များနှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှလည်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစေလွှတ်၍ မြန်မာ့တပ်မတော်သို့ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအထောက်အကူပြုဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းကာ ရောဂါထိန်းချုပ်ကုသရေးဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ သည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တပ်မတော်မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် တပ်မတော်၏ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် နားလည်ထောက်ခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် လက်တွေ့ကျကျနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည့်အခြေအနေများ၊ နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်း ရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး နှိမ်နင်းရေးတို့တွင် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား သတင်းအချက် အလက်နှင့် နည်းပညာများဖလှယ်ကာ အတူတကွပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားရန် လိုသည့်အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား မီဒီယာပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ တပ်မတော်များနှင့် မိတ်ဝတ်မပျက် ဆက်ဆံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး မူကြီး(၅)ရပ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒများအတိုင်း အလေးထားလိုက်နာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ အာရှဒေသ၊ အာဆီယံ ဒေသအတွင်း စစ်ပွဲနှင့် ပဋိပက္ခကို ဦးတည်သည့် မည်သည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များကိုမဆို မလိုလားဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဒေသတွင်းတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးအတွက် အတူတကွ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားရန်လိုသည့် အခြေအနေများ၊ မြဝတီဘက်တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရွှေကုက္ကိုလ် မြို့သစ်စီမံကိန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံက ဆောင်ရွက်နေ သည့် OBOR စီမံကိန်းများနှင့် လုံးဝ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေနှင့်အညီ၊ စည်းကမ်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေ များနှင့် နှစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။